छोराछोरीको लागि पोथे्र दम्सी बारेमा पहेली जानकारी विकृत हुन हुँदैन!
कथा, पहेली, कार्टून, कथा, खिलौने र चित्रहरू मार्फत उहाँको वरिपरि दुनिया थाह प्राप्त गर्न सानो सजिलो तरिका मानिस। आखिर, बच्चा को दुनिया कल्पना र कल्पना भरिएको छ। तसर्थ, छोराछोरीलाई थप पाठयपुस्तक वा विश्वकोश देखि सामाग्री भन्दा तिनीहरूलाई उपलब्ध लागि पोथे्र दम्सी बारेमा हास्यास्पद चाल्नी।
गम्भीर सम्भव र आवश्यक बारेमा बच्चाहरु संग allegorically बोल्न
यसलाई छक्क र प्रतिरोध गर्न आवश्यक छैन। यो बच्चाको पहेली मार्फत बालक जस्तो मनोविज्ञान र वर्तमान ज्ञान को विधिपूर्वक मा "मा बारेमा जाने" सबै भन्दा राम्रो छ। बच्चाहरु को लागि, यो प्रक्रिया रोचक र रमाइलो र रोमाञ्चक हुनेछ। बच्चाहरु बाहेक, माथि छनकहरू टिप्ने, को कुरा विस्तृत, विश्लेषण, तुलना, विभिन्न विषयहरुमा साधारण जमीन खोजी, हेर्न उपस्थिति, पेशा, आकार मा सुविधाहरू हाइलाइट सिक्न। अमूल्य पदमा पहेलियों ल्याउन। बच्चाहरु सजिलै सरल ताल रेखाहरू सम्झिन, स्मृति तालिम। केही पहेलियों र छोटो quatrains को मस्यौदा आफ्नो हात प्रयास गर्न आफूलाई गर्न थालेका छन्।
पहेली जानकारी बोक्न पर्छ
यो यस्तो सामाग्री साँचो तथ्य समावेश चयन गर्न महत्त्वपूर्ण छ। उदाहरणका लागि, छोराछोरीको लागि पोथे्र दम्सी बारेमा पहेली हुन सक्छ:
सबै सुई संग spiked
क्रिसमस रूखहरू अन्तर्गत घाँस मा लुक्दै।
उहाँले, स्याउ प्रेम मशरूम -
वासस्थानमा उहाँले तिनीहरूलाई drags।
र पहिलो नजर मा, सबै राम्रो छ। छोराछोरीको लागि पोथे्र दम्सी बारेमा भन्दा साधारण रहस्य। यहाँ तुरुन्तै पशु धेरै महत्वपूर्ण विशेषताहरु देख्नुहुन्छ रूपमा बच्चा: यसको बाहिरी विशेषताहरु - आशुक्रोधी कोट; आफ्नो स्वाद प्राथमिकताहरू - स्याउ र मशरूम; निवास - प्वाल। खैर, कुनै एक किन पोथे्र दम्सी छेद मा यो सबै drags, कुनै पनि प्रश्न छ। आखिर, यो त्यो जाडो harvests लागि आपूर्ति थियो स्पष्ट हुनुपर्छ!
यो बच्चाहरु "गलत" पहेली अनुमान गर्न असम्भव छ!
वास्तवमा, यो जसको सुई हामीलाई घेरने कि धेरै तरिका बारे विकृत जानकारी यी वयस्क भयो कि गुलाबी स्याउ मा पिन एक हेज हग, को तस्वीर को नजर मा वयस्क indignation मा यसैले उत्पन्न गर्दैन। र एक छोराछोरी निरर्थक लागि पोथे्र दम्सी बारेमा यो रहस्य।
पहिले यी पशुहरू तर केवल कैद मा कीराहरू, कीडे र साना मुसा र फल र तरकारी खान्छन् हुन सक्छ।
दोश्रो, को जाडो hedgehogs लागि कुनै पनि आपूर्ति बोसो लागि बाहेक, छैन। को जाडो पछि, यी पशुहरू भालू, भ्यागुतो, badgers र साँप जस्तै सुत्न।
तेस्रो, क्रममा एक सुई prick urchins मा स्याउ यो प्रशस्त मात्रामा आशुक्रोधी कोट बसाबास गर्नु कि परजीवी को छुटकारा गर्न। र सत्य मात्र हो एक छ - हेज हग ढाड सट्टा नरम फ्लफी फर। त्यसैले एक पहेली, वयस्क, consciously वा आफ्नै अज्ञानता, भ्रामक र एक सानो मान्छे zagadyvaya।
पहेली ज्ञान दिन्छ
त्यसैले, तपाईं संसारको बारेमा बच्चाहरु को लागि सामान टिप्न अघि, वयस्क गर्न आवश्यक राम्रो छलफल गरिने विषय, एक गहन अध्ययन हो। उदाहरणका लागि, प्रतिक्रियाहरू एक पोथे्र दम्सी बारेमा पहेली कहिलेकाहीं hive, को मौरीले भयावह रात बर्बाद, र तिनीहरूलाई खाने जानकारी, यी पशुहरू कीडे र भ्यागुतो प्रेम खान घृणा छैन, र कुखुरा हुनसक्छ। तर कसरी यी तथ्यहरू प्रस्तुत गर्न बालबालिकालाई समुद्र urchins निष्कर्ष आकर्षित छैन भनेर - वन मा मुख्य किरा, तर तिनीहरूलाई संग युद्ध गर्न गएन?
यो सानो सानो जनावर
छैन स्यालले, छैन फेर्रेट,
उहाँले चूहों खान रुचि,
कीडे र भ्यागुतो।
यसको प्वाल हरेक वर्ष
निद्रामा नोभेम्बर मा पर्छ।
उहाँले गर्न सक्छन् सर्प पराजित!
उहाँले thorns छ ... यो - (पोथे्र दम्सी)!
यो पहेली मा थप सत्य छ, तर विशेष बच्चाहरु सही जवाफ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ भनेर होइन, राइम को अन्त मा लगाएको सबैभन्दा हडताली सुविधा। बाहिर जानकारी piecemeal दिने, एक छोराछोरीले यो बुझ्न समय दिने, एक ब्रेक लिनुपर्छ, र एक सानो otgadku टिप्ने, "भाग्य बताउन"। यस पहेली दुनिया जानकारी को लागि कक्षा मा सामाग्री प्रयोग गर्न निर्णय भने, यो, कि जवाफ ज्ञात गरिनेछ पछि, एक पटक फेरि राइम्स सूचीबद्ध थिए जो संकेत, बारम्बार सिफारिस गरिएको छ।
कसरी किंडरगार्टन एउटा बच्चा सिकाउन मा केही सरल नियमहरू
वयस्क प्रश्न साना मान्छे, वा कसरी छोराछोरीलाई छ?
संसारको सबैभन्दा सुन्दर पुतली (फोटो)
गुलाबी Tulip - एक नाजुक र उत्कृष्ट फूल
कति ईयू देशहरूमा? आधार र संगठनको इतिहास। बेलायत र ईयू
"मौद्रिक समता - यो ..." वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बारेमा एक सानो
सिविल युद्ध: इतिहासको परिभाषा
कसरी जाडो आवास को लागि फ्रेम घर ढाक्नु गर्न? माल र टेक्नोलजी
डिजेल इन्धन injectors, निदान र मरम्मत
के सपना माछा किन्न? के दृष्टि रोक्छ